लकडाउनले काम खो’सियो, सडकमा हिँडेका बोम बहादुरले अन्तत खानै नपाएर सकडमै प्रा’ण त्या’गे ! – UPDATE LINK
लकडाउनले काम खो’सियो, सडकमा हिँडेका बोम बहादुरले अन्तत खानै नपाएर सकडमै प्रा’ण त्या’गे !
सोमबार दिउँसो करिब एक बजेको समय थियो । गुल्मी सदरमुकाम तम्घासको पुतली बजारभन्दा केही पर सुनसान सडकको छेउँमै बन्द एक घरको सटर बाहिर एक जना सडक मजदुर भो’को पे’ट टा’र्नका लागि त्यस घर परिवारसंग हा’त ट’क्रा’उँदै थिए ।
उनको आवाज सुनेपछि घर भित्र बसेका केहि महिलाहरु सटर नखोली भित्र उभिएर उनको भोको पेटको वि’लौ’ना सुनिरहेका थिए ।त्यो समयमा विहान पाकेको खान सकिएकोले चामल दिने र ती भो’को पे’ट मजदुरले लगेर आफै खान पकाएर खाने कुरा चलिरहेको थियो । सोही अनुरुप उनलाई प्लाष्किटमा पुग–नपुग एक माना चामल उनको हातमा थ’माइयो ।
त्यो चामल पाएकोमा ति मजदुर खुशीले गद्गद् देखिन्थे । दिनको त्यो बेलासम्म भो’को पे’ट र एक गा’सका लागि उनको त्यो दुहाईको दृ’श्य ह्ृ’द’यवि’दा’रक थियो । उनको कथा ब्या’था लिने प्रयास थालियो । उनले आफ्नो परिचय दिए ।उनले दिएको परिचय अनुसार उनको घर बाग्लुङ्ग हो । उनको नाम बोमबहादुर परियार हो ।
उनले आफ्नो जन्म २०१८ सालमा भएको र ९ बर्षको उमेरदेखि सडक मजदुरी गर्न थालेको बताए । झ’ट्ट हेर्दा उनको शरिर ह’ट्टा’क’ट्टा भए पनि उनको मु’हा’रमा नि’रा’सा देखिन्थ्यो । उनैलाई राहत स्वरुप राश’न दिने सोचेर हामी दोश्रो दिन दिउँसो उनले वर्षौदेखि पल्लेदारी मजुदुरी गर्दै आएको स्थान बुढाथोकी बसपार्कमा पुग्यौं ।
उनलाई खोज्दै जाने क्रममा बसपार्कभन्दा अलि माथि मानिहरुको भि’ड देखियोें । उक्त भिडको नजिकै पूग्दा हिजो भो’को पे’ट रहेर एक गा’सका लागि कसैसंग हा’त फैलाई रहेका बोमबहादुर ल’म्प’सा’र परेको भेटियो । ‘तिमीले यसरी भौ’ता’रि’नु पर्दैन, आफ्नो गा’स का’टे’र भएपनि एक महिनालाई पुग्ने रा’श’न दिन्छौं ।
’–भनेर छु’ट्टी’एका हामी बोमबहादुरलाई सडकमा ल’म्प’सा’र परेको दृ’श्य देख्नु पर्यो । कहिलेकाँही बसपार्कमा ओ’र्लि’दा पैसा नलिएरै हाम्रा झो’ला’झि’म्टी’ ठाउँमा पुर्याइदिने उनै बोमबहादुरलाई भनि एक बोरा चामल, दाल, तेल लगाएतको राहत सामग्री बाकेर पुग्दा यसरी उनी सडकमा ल’डे’को देख्दा म’न च’स्कि’ने स्वाभाविक नै थियो ।
प्रहरी सहित त्यहाँ जम्मा भएका सबैले उनलाई उठाउने–जगाउने प्रयास गर्यौ, तर उनी मृत प्राय देखिन्थे । तत्कालै जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गोपाल चन्द्र भट्टराई, डिएसी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे आए । उनीहरुले उनी लडेको स्थानलाई सिल्ड गरे । बसपार्क क्षेत्रका बासिन्दासँग सोधपुछ गर्दा उनलाई डन भनेर चिनिदो रहेछ । हुन पनि ‘डन’ भनेर फुरुक्क पार्दा उनी कामका लागि डन नै थिए । उनी जुन सडकमा फुर्कीफुर्की काम गर्दै आएका थिए त्यही सडकमा भोको पेट निरिही भएर लम्पसार पर्नुपर्यो ।
उनलाई गुल्मी अस्पताल पुर्याउँदा डाक्टरबाट मृ’त घो’ष’णा गरिएको दु:खत खबर डिएसी पाण्डेले सुनाए । उनका परिवारजन र उनको वास्तविक जीवन कथा बुझ्न उनका परिवारजनलाई भेट्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मै पुगियो । त्यहाँ पुगेर मृ’त’क बोमबहादुरकी श्रीमती ५० बर्षीया भिमकुमारी परियारसँग बुझ्दा उनीहरु बाग्लुङ्गको बुर्तिबाङ्गबाट वि.स.२०४६ सालमा तम्घासमा मजदुरी गर्न आएको बताईन् । उनीहरु ३७ वर्ष देखि घर नफर्केको बताइन् । उनीहरुका ८ वटी छोरी छन् । तम्घासको बाघमारेमा बिशाल श्रेष्ठको जमिनमा सानो छा’प्रो बनाएर बस्दै आएका छन् ।
श्रीमान वोमबहादुरसँग बि’छो’ड भएको ६ बर्षपछि मंगलबार पहिलो पटक श्रीमानको रुपमा उनको मृ’त श’रि’र देखेको उनले बताईन् । न आफूले श्रीमानको दुःख–सुख हेर्ने न श्रीमानले आफ्नो दुःख सुख हेर्नेे भएका कारण यो अवस्था आएको उनको भनाई थियो । त्यो परिवारलाई संरक्षण दिदै आएका घरबेटी बिशाल श्रेष्ठले मृ’त’कका दाजु भाईको पत्तो लगाउन नसकिएको र दा’ह’सं’स्का’र गराउन र का’ज’कि’रि’या चलाउन मिडिया मार्फत सहयोगको अपिल गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । उनी (श्रीमती)संग उनका श्रीमानको हिजो भो’को पे’ट र एक गा’सका लागि कसैको घरमा हा’त फैलाउन गएको कुरा सुनाउँदा उनले भनिन
लकडाउन यता आफ्नो समस्या पनि उस्तै भएको र छा’क टा’र्न निकै समस्या परेको दुःखेसो गरिन् । उनी जस्तै सडक मजदुर र पारिवारिक बे’मे’लमा परेका मजदुर मात्र होईन, लकडाउनका कारण विहान बेलुकाको छा’क टा’र्न समस्यामा परेका थुप्रै मजदुरहरु छन् । अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा स्थानीय सरकारले खाद्यन्न रा’ह’त बाँडे पनि यसपाली उनीहरुले वास्तै गरेका छैनन् । उनीहरुले मा’न’वी’य’ता सोचुँन, यसरी नै कुनै मजदुर भो’को पे’ट नमरुँन् …